अपचको समस्या छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिए समाधान हुन्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अपचको समस्या छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिए समाधान हुन्छ
अशोज १८ गते, २०७६ - १८:२४
काठमाडौं । खानपानमा सावधानि नअपनाउँदा व्यक्तिमा अपचको समस्या देखिन्छ । चाडबाडको बेलामा झन् धेरै प्रकारका खानेकुरा एकैपटक भोजन गर्दा पनि सन्तुलन नहुन सक्छ । अपचको समस्याले कहिले काँही निकै ठुलो रुपमा पनि लिन्छ । अपचकै समस्यालाई हेलचेक्र्याई गर्दा अन्य खालको समस्या पनि देखिन सक्छ ।
अशोज १८ गते, २०७६ - १८:२४ मा प्रकाशित